Steam: Mutengi waValve izvozvi nerutsigiro rwePS5 controller | Linux Vakapindwa muropa
Valve yakagadziridza vhidhiyo yemutambo mutengi chiutsi. Iye zvino, neshanduro nyowani, unogona kunakirwa nezvimwe zvakanaka, senge rutsigiro rwevatariri vemitambo yevhidhiyo yePS5 nyowani uye zvimwe zvakagadziriswa. Nenzira iyoyo, kana iwe uchida kutamba neiyo Sony PlayStation 5 controller, unogona kuzviita pasina dambudziko.
Itsva Sony Dual Sense inoshanda kwazvo, kusanganisira trackpad yayo, gyroscope, lightbar, uye hápitca (vibrate) basa remutongi uyu. Valve yakawedzerawo swipe mode ye trackpads uye gyro, uye zvirinani rutsigiro rwemitambo inoshandisa mbishi kuburitsa, pamwe nekugadzirisa zvimwe zvikwata kubva mushanduro dzakapfuura.
Iyo Steam mutengi yeLinux iinewo dzimwe shanduko dzakanaka. Kwete chete kune mamwe mabrowser ekuvandudza mashandiro, zvimwe zvinhu zvakagadziridzwa nekugadziriswa futi. Semuyenzaniso:
Iko kune kugadzirisa kweiyo Steam nguva yekumhanyisa kune v0.20201203.1.
Iko kusefa kwemidziyo yekuenderana inowanika mune dialog zvivakwa zvemutambo wevhidhiyo kwagadziriswa.
Dambudziko nekuvhurwa kwemitambo yemavhidhiyo yakaitika neshanduro Proton 5.13 yakagadziriswa zvakare (Valve neCodeWeavers kuitiswa kweWine kuita mitambo yemavhidhiyo yemuno inoenderana neWindows paGNU / Linux nerunyararo rwuzere kubva kune Steam mutengi chairo).
Yakagadziriswa bug iyo isina kumira kana uchishandisa iyo yekumira bhatani mune yevatengi interface.
Wakawedzera auto-kutama kwemaraibhurari eSteam anoshandiswa mune yekare SteamApps.
Yakagadziriswa iyo bug yakakonzera iyo interface windows kuti iite seisina chinhu painotanga Steam mune dzimwe nguva.
Kana uchifarira gadziridza, unogona kuzviita kubva kune Steam mutengi iwe wawakaisa kana kurodha pasi vhezheni iyi Kana iwe uchiri usinayo uye iwe uchida kutanga kutsvaga zvese zvingangoitika zvenyika yekutamba muLinux.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Steam: Valve mutengi ikozvino nePS5 controller rutsigiro